Waa wakhtiga si ay u tagaan dhar shopping. Yaa ma jecla dharka kor? style waa halkii ay ka duwan mahrajaano Brazil. Ka fikir dheeraad ah "Soldier Prussian" qiyaasta culus ee qurxiyo iyo sequins!
Ereygan waxaa loola jeedaa pubs, baararka ama maqaayado. Ku dhowaad dhammaan iyaga ka mid ah ka qayb qaataan dabaal Cologne Carnival. Waxay nadiifiyo alaabta si ay u abuuraan dabaqa a qoob ka weyn iyo qurxin wax walba colorfully muddo lix maalmood ah dabaal oo xiriir ah. In pubs badan oo degaanka, kaliya Kölsche music waxaa ciyaaray (songs in lahjad Kölsch ah). inta badan ee aad u heli doonaan in ay 300-mitir oo safaf dhaa-dheer ee hore ee masraxyada dhaqanka.
In 1824 in Beuel, qayb ka mid ah Bonn, koox ka mid ah haweenka dhaqe sameeyay ay guddiga Karneval u gaar ah. Waxa ay u muuqataa, waxay ahaayeen daalay dhaqidda dharka halka qof kasta oo kale ahaa dabaal Karneval. Waxay weerareen Hall Town iyo wareegtay dowladda magaalada. (Bal haatan soo xusuusta ... Karneval waa waqti marka saraakiisha dowladda furan caricatured, iyo dawlad ku majaajiloodaan loo doortay. maanta, this "foosha xun ee Town Beuel ah Hall" by haweenka lagu muujiyay live on Television. Girl Power!
Subaxnimadii, Catholics kaniisadda aadaa si aad u hesho karoos dambaska wejiga sida calaamad toobadda. makhribkii, sano ee xilli Carnival dhaqan ahaan gabagabeeyay at casho kalluun.
Baannu kuu qanciyay in ay ka qayb Cologne Festival 2019, weli? Midhadh tigidhada tareenka aad ka Sava A tareenka in daqiiqo oo dheeraad ah ma, ajuurada sacoto! Taas oo macnaheedu yahay lacag dheeraad ah Weetschaff 🍻
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cologne-festival/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)